စက်တင်ဘာထာဝရ: အမျိုးမစစ်တဲ့သူ သင်္ကန်းပတ်ခဲ့ရင်…သာသနာအတွင်းမှာ ဖင်တုံ ရင်ခုံ ကိလေသာ ထကြွရေးပဲ အမျိုးမစစ်တဲ့သူ သင်္ကန်းပတ်ခဲ့ရင်…သာသနာအတွင်းမှာ ဖင်တုံ ရင်ခုံ ကိလေသာ ထကြွရေးပဲ
အမျိုးမစစ်တဲ့သူ သင်္ကန်းပတ်ခဲ့ရင်…သာသနာအတွင်းမှာ ဖင်တုံ ရင်ခုံ ကိလေသာ ထကြွရေးပဲ အမျိုးမစစ်တဲ့သူ သင်္ကန်းပတ်ခဲ့ရင်…သာသနာအတွင်းမှာ ဖင်တုံ ရင်ခုံ ကိလေသာ ထကြွရေးပဲ
ဗုဒ္ဓဘာသာအတွက် ၀မ်းနည်းစရာ လပ်တလောမှာ စိတ်ဓာတ်မြှင့်တင်ရေး ခေါင်းစဉ်တပ်ကာ သင်တန်းတခု ကြည့်လိုက်ရတယ်၊ ဣဒ္ဓိပါလ ကုလားဆာဒူးရဲ. လုပ်ရှားမူတွေဟာ ဖေ့ဘုတ်မှာ ရုပ်သံအနေနဲ. တွေ.မြင်ရတော့ သာသနာ့အန္တရာယ်ကျရောက်နေပြီဆိုတာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ အမှန်တကယ် သိရှိရန်လိုပါတယ်၊
အခြေခံ လူ.သီလရှစ်ပါးသီလမှာတဲ့ နစ္စ ဂီတ ကခြင်း ခုံခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်လိုက်တဲ့ အတွက် အကုသိုလ်မဖြစ်ဘဲ ကုသိုလ်ဖြစ်စေပြီး သီလကိုအခြေခံပြီး သမာဓိနှင့်ပညာကို တဆင့်ပြီးတဆင့် ကျင့်ယူရပါတယ်၊ဘုရားရှင်က သဗ္ဗညုတရွှေဥာဏ်တော်နှင့်ကြည့်ကာ ကခြင်း၊ခုံခြင်းသည် ကိလေသာရာဂစိတ်ကို ထကြွစေတယ် တရား ထူးကို မရနိုင်ဘူး၊သမာဓိကို ပျက်စေတဲ့အတွက် ကခြင်းခုံခြင်းကို ရှောင်ကြဖို.ဗုဒ္ဓကချမှတ်ခဲ့ပါတယ်၊၊
ရဟန်းဆိုတာ (၂၂ရ) သွယ် သိက္ခာပုဒ် ၀ိနည်းတွေကို လိုက်နာကျင့်သုံးနေထိုင်ပါမယ်လို. သိမ်ထဲမှာ ကမ္မ၀ါစာ ဖတ်အပြီးမှာပဲ အာမခံခဲ့ရတယ်၊ အခြေခံ လူ.သီလထက် များစွာကြီးမားတဲ့ ၀ိနယပိဋကတ် ၀ိနည်း(၅)ကျမ်းမှာ ပါတဲ့ ဗုဒ္ဓရဲ.၀ိနည်းသိက္ခာပုဒ်များကို ရဟန်းတိုင်း မလိုက်နာလို.မရ၊လိုက်ကိုလိုက်နာရမည်ဆိုတာ ဆရာကောင်း သမားကောင်းထံ နည်းခံပြီး စာပေပရိယတ္တိ သင်ကြားခဲ့သည့် ရဟန်းတိုင်း သိကြပါတယ်၊၊
ရှမ်း၊ကရင်၊ကချင်၊မွန်၊မြန်မာ မည့်သည့် တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်ကဖြစ်ပါစေ ဗုဒ္ဓသာသနာအတွင်းမှာ ကမ္မ၀ါစာ ဖတ်၍ ရဟန်းဖြစ်လာရင် ၀ိနည်းသိက္ခာပုဒ် ဥပဒေအောက်မှာ တန်းတူ နေထိုင်ကျင့်သုံးရပါတယ်၊အလားတူ အမေရိကန်၊ကနေဒီယံ၊အင်္ဂလိပ်၊ကုလား၊တရုတ် ဘယ်နိုင်ငံခြားသားပဲဖြစ်စေ၊ရဟန်း ပြုလိုက်ရင် ၀ိနည်းအတိုင်း နေထိုင်ရပါတယ်၊မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကိုယ်တိုင် အသိမှတ်ပြု၍ ဆဋ္ဌသင်္ဂါယနာ တင်ထားတဲ့ ပိဋကတ်(၃)ပုံ ပါဠိတော်အဋ္ဌကထာများသည် ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ခိုင်မာသည့် ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ အခြေခံ ဥပဒေ တခုဖြစ်ပါတယ်၊၊
ဗုဒ္ဓစာပေနဲ. ဆန်.ကျင်ဖက် အယူဝါဒ မှားယွင်းစွာ သင်ကြားပေးနေတဲ့ ဣဒ္ဓိပါလကို တာဝန်ရှိသူများက တားဆီး ရမယ်၊ သူဖွင့်ထားတဲ့ သင်တန်းက “ ဘာသာရေး ဆွေးနွေးစရာမလိုဘူး၊ကခြင်း ခုံခြင်းဟာလည်း ရှက်စရာ ကြောက်စရာ မလိုဘူး၊ ဟီရိ သြတ္တပ္ပတရား ရှိစရာမလိုတဲ့ သဘောကို ပြောနေတာဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို စော်ကားရာရောက်တယ်၊လူတွေ တယောက်နဲ. တယောက် တွဲလို. ကကြရာမှာ ဖွင့်တဲ့ သီချင်းစာသား အဓိပ္ပါယ်ကလဲ “ အ၀တ်တွေအားလုံး ချွတ်ပြစ်လိုက်” ဖြစ်နေပါတယ်၊မူရင်းကတော့ アゲアゲ Every ဆိုတဲ့ DJ OZMA တေးဂီတအဖွဲ.က ဆိုထားတာ YouTube မှာ ကြည့်လိုက်ရင် အ၀တ် အားလုံးချွတ်ပြစ်တာ မြင်ရမှာပါ၊ ကိလေသာစိတ်ဆိုတာ အ၀တ်များနဲ. ဖုံးကာထားတာမှ တော်ကာကြတယ်၊လက်ချင်းတွဲလို. သူ.မှာ အ၀တ်မရှိ၊ ငါ့မှာလဲ ကိုယ်တုံးလုံးဆိုရင်တော့ စဉ်းစားသာကြည့်ပေတော့၊ဒီထဲ ပူးပူးကပ်ကပ်နဲ. ပူးတွဲသာ ကကြရမယ်ဆိုရင် ကိလေသာ ရာဂစိတ်တွေ အလွန်ထကြွသောင်းကြမ်းကာ လိင်ကိစ္စ ရှင်သန်နိုးထရေး သင်တန်းဖြစ်သွားတယ် ဆိုတာ လူတွေပဲ စဉ်းစားရင်သိနိုင်ပါတယ်၊၊
ဘုရားလက်ထက်က ရဟန်းတပါး သူ.စိတ်ထဲမှာ“ င့ါမှာ ဒီလိင်တံကြီး ရှိနေလို. ကိလေသာ ရာဂစိတ်တွေ ဖြစ်တာပဲ၊ဒါကြီးမရှိရင် အေးသွားမှာပဲလို. အတွေးဝင်ကာ သူ.လိင်တံကို ဖြတ်လိုက်တယ်၊အဲမှာ ဘုရားရှင်က ခန္ဓာကိုယ်ကို မညှင်းဆဲရဘူး၊ကိလေသာ ကုန်ဖို.ဆိုတာ ကိလေသာ ငြိမ်းကြောင်းတရားကို အားထုတ်ရမယ်လို. ဟောခဲ့ပါတယ်၊ မှားယွင်းတဲ့ အယူဝါဒတွေကို ၀ါဒဖြန်.သူကဖြန်.၊အဲလိုမျိုး စာပေနဲ.မညီတဲ့ ၀ါဒတွေကို အာဏာပိုင်များက သင်ကြားခွင့်ပြုထားမယ်ဆိုရင် သာသနာ့အန္တရာယ်ကျရောက်နေပါပြီ၊ သင်တန်းမှူး ဆာဒူး ကိုယ်တော်ကလဲ သူ.အင်္ဂါဇတ်ကို မဖြတ်ထားသလို တက်ရောက်တဲ့ မိန်းမ၊ယောကျားအားလုံး ကလဲ လက်နက်အပြည့်စုံပဲ၊ကကြရင်း ခုံကြရင်း ရင်တွေခုံကြမယ်၊နောက်ဆုံး ဖင်တုံ ရင်ခုံ သင်တန်းက ငရဲဘုံ သွားဖို.လမ်းစပါပဲ၊ လူဆိုတာ ဟီရိ၊သြတ္တပ္ပ အရှက်အကြောက်တရားကို အခြေခံပြီး လောဘ၊ဒေါသ၊မောဟ ထူပြောတဲ့ ကိလေသာအပူတွေကို ပါးသွားအောင် ကျင့်ကြံအားထုတ်ရပါတယ်၊၊
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ဆာဒူးဆိုတာရှိတယ်၊သူက အ၀တ်မ၀တ်ဘူး၊လိင်တံကို သော့ခလောက်ခပ်ထားတယ်၊လူတွေ အလယ်မှာ သူလိင်တံကိုအထင်ရှားပြထားတယ်၊ကိလေသာစိတ်ကို သော့ခပ်ပြီး ထိန်းထားတယ်လို. ယူဆဟန် တူပါတယ်၊ဗာရာဏသီမြို. ဂင်္ဂါမြစ်ကမ်းမှာ ယနေ.ချိန်ထိ ဆာဒူးတွေ အ၀တ်မပါ ကိုယ်တုံးလုံးနေကြတာကို တွေ.နိုင်ပါတယ်၊ဆာဒူးဆိုတာ မကောင်းမူ လုပ်ရမှာကို ၀န်မလေးဘူး ဟိရိ၊သြတ္တပ္ပ အရှက်အကြောက် ကင်းမဲ့ နေတာပါ၊ဆာဒူးရဲ. လိင်တံကို ယောကျားရော မိန်းမရော လက်နဲ. လာတို.တယ် ထိတယ်၊လိင်တံထိထားတဲ့ လက်က သူတို.နဖူးကို ပြန်ထိတယ်၊အဲဒါက အိန္ဒိယရဲ. ယုံကြည်ကိုးကွယ်မူတခုပါ၊ဆာဒူးကုလားဆိုတာ အရှက်မရှိဘူး၊စကားပြောရင် တဖက်နားထောင်သူကို လက်ညိုးထိုးပြီး ကုလားအကျင့်တိုင်းပြောတတ်တယ်၊၊
ပုဏ္ဏားမျိုး၊မင်းမျိုး၊ကုန်သည်မျိုး၊ကျွန်မျိုးဆိုပြီး အမျိုးလေးခုထဲက ဘယ်အမျိုးကပဲဖြစ်စေ ဘုရားသာသနာမှာ ၀င်ရောက်လာပြီဆိုရင် ဂင်္ဂါ၊ယမုနာ စတဲ့ မြစ်ကြီးငါးသွယ်က စီးဆင်းလာတဲ့ ရေများသည် မဟာသမုဒ္ဒရာသို. ရောက်တဲ့အခါမှာ မူရင်းအမည်နာမတွေကို ပယ်စွန်.ကာ မဟာသမုဒ္ဒရာဟုသာ ခေါ်ဝေါ်သလိုပဲ အမျိုး(၄)ပါး အမည်ကိုဖျောက်၍ သကျပုတ္တ သာကီယနွယ်ဖွား ဘုရားသားတော်ဟုသာ ခေါ်ကြရပါတယ်၊၊
သာသနာအတွင်းက ရဟန်းအားလုံး ဓမ္မနှင့်ဝိနယကို တန်းတူလိုက်နာ ကျင့်သုံးရတယ်၊ဘယ်သူတော့ လိုက်နာ၊ ဘယ်သူတော့ လိုက်နာစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့ ခွဲခြားမူတွေ ဗုဒ္ဓ၀ိနည်းမှာလုံးဝမရှိဘူး၊ရဟန်းတော်တိုင်း ပိဋကတ် စာပေအတိုင်း နေထိုင်ကျင့်သုံး ဟောပြောပို.ချရတယ်၊ဒီနေရာမှာ လူမျိုးရေးနှင့် ပတ်သက်နဲ. အတွေ.ကြုံတခု ပြောပြလိုတယ်၊အိန္ဒိယရောက်တော့ အိန္ဒိယလူတွေက မြန်မာကို“ဘာရမား”လို.ခေါ်တာ၊သူဟာ အိန္ဒိယသား မဟုတ်ဘူး ဗမာနိုင်ငံသားလို.ခေါ်တာပါ၊ကိုယ်က မြန်မာနိုင်ငံကမို. ကိုယ်ကို ဘားရမား ခေါ်တာ ဘာမှပြဿနာ မရှိဘူး၊မူရင်းအမျိုးအနွယ်ကိုခေါ်တာ စိတ်ဆိုးစရာမရှိပါဘူး၊မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရောက်နေတဲ့ တရုတ်ကို တရုတ်လို.ခေါ်တာ နာစရာမလိုသလို ကုလားမို. ကုလားခေါ်တာလဲ စိတ်ဆိုးစရာ မလိုပါဘူး၊အမေရိကန် နိုင်ငံမှာလဲ last Name မှာ အမျိုး အနွယ် နာမည်ကို ခေါ်နေတာပါ၊ အပြင်လက်တွေ.မှာပဲ မျိုးရိုးဇာတိနွယ်ကို ခေါ်ကြသလို ခွဲခြားမူကတော့ ရှိနေဆဲပါ၊ဘယ်လိုပင်ဖြစ်စေ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာက လူမျိုး၊ဘာသာ မတူကြသည့် လူမျိုးပေါင်းစုံ ပေါင်းဆုံ ထားသည့် အမေရိကန်နိုင်ငံကြီးမှာ အခြေခံဥပဒေ အောက်မှာ သမ္မတအစ တက်စ်ကစီ သမားအဆုံး တန်းတူ နေထိုင်ရတာမို. ချမှတ်တဲ့ ဥပဒေအတိုင်း လူတိုင်းက လိုက်နာတော့ တိုင်းပြည်တိုး တက်တာအမှန်ပဲ၊၊
ဆုံးဖြတ်ချက် ချနိုင်ရန် သံဃမဟာနာယက ဆရာတော်ကြီးများအား ဒကာ ဒကာမများက လျှောက်ထားရန်လို
မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဝါဒ အယူမှားမူတွေကို သင်ကြားပို.ချ ဟောပြောတဲ့ ကိုယ်တော်များကို မန္တလေး မစိုးရိမ်တိုက်သစ် ဦးဣန္ဒာစရိယာဘိဝံသ(မစိုးရိမ်စာသင်သား)က ပိဋကတ်စာပေအရ စာတွေရေးသားပြီး သက်ဆိုင်ရာကို တင်ပြ ခဲ့ရာမှာ မဟာနာယကအဖွဲ.က မိုးပြာဂိုဏ်းကို ပိတ်ခဲ့နိုင်တယ်၊ဓမ္မစေတီ ဦးကောသလ္လ တရားများကိုလည်း စီစစ် သတိပေးနိုင်ခဲ့တယ်၊အလားတူ အခုဖြစ်နေသည့် သာဓုခေါ်စရာမလို လက်ခုပ်သာတီး၍ မြူတူးပျော်ပါး တွဲကတဲ့ သင်တန်းက ဆာဒူး ဣဒ္ဓိပါလကို အဓမ္မ၀ါဒ ချနိုင်ရေးကို အားလုံးက လုပ်ဆောင်ရမည့် တာဝန်ရှိတယ်။
လွှဲမှားတဲ့ အယူဝါဒတခုကို Brain Wash အလုပ်ခံရတဲ့ သူငယ်တွေအဖို. သူတို. မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ ဖြစ်သွားရင် ဘ၀ တခုလုံးသေတော့တာပါ၊ဗုဒ္ဓ၀ါဒနှင့် မကိုက်ညီတဲ့ သင်ပြမူဖြစ်တယ်၊သင်္ကန်းဝတ်ပြီး ဘုရားနည်းလမ်းကျ မဟုတ်ဘဲ မှားယွင်းတဲ့ လုပ်ရပ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက် “ ယူနီဖောင်းဝတ်စုံနှင့်လုပ်ငန်း မကိုက်ညီဘူး (၀ါ) သင်္ကန်း ၀တ်ပေမဲ့ သင်္ကန်းနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာပုဒ်တွေကို ဖောက်ဖျက်တဲ့အတွက် ဆာဒူး ဣဒ္ဓိပါလဟာ ဖင်တုံ ရင်ခုံ လှုပ်ရှားတဲ့ ကာမဂုဏ် ထကြွနိုးကြားရေးကို အခြေခံကာ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ. ဟီရိ သြတ္တပ္ပ အရှက် အကြောက် လောကပါလတရားကို ဂရုစိုက်စရာမလိုတဲ့ သဘော ဟောပြောတာဟာ သာသနာကိုဖျက်တာပါ၊၊
အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းဆိုတိုင်း မိဘတွေက သားသမီးကို အမှတ်တမဲ့မလွတ်ရဘူး၊သင်တဲ့သူက ဘယ်လိုလူလဲ ဘာ ရည်ရွယ်ချက်လဲ ဘယ်လိုပုံဖော်နေတာလဲ ပြောတာနဲ. လုပ်တာကိုက်ညီသလား ဒါတွေစဉ်စားရမယ်၊ ဒီခေတ်မှာ အတုယောင်သမားတွေက အသွင်အမျိုးမျိုးနဲ. ခိုးနေကြတာကို မြင်အောင်ကြည့်စေချင်ပါတယ်၊ အဆိုးနှင့် အဆိပ်များကို ကခုန်မြူးတူး၍ ကုစားလို. မရသလို ကျူးလွန်စော်ကားခဲ့တဲ့ ကံကြီးထိုက်မူတွေကိုလဲ ဖင်တွန်. ရင်တွန်. ကပြလိုက်ရုံနှင့် ရှိထားတဲ့ အပြစ်တွေက ပျောက်မသွားပါဘူး၊ ကြံ့ဖွတ်အသင်းက ငွေကြေး ထောက်ပံ့ကာ ဗိုလ်မှူးချုပ် ထွန်းသိန်းကိုယ်တိုင် ဒီသင်တန်းကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်၊အခမ်းအနားတခုလုံး အစိမ်းရောင် ဆိုင်းဘုတ်၊မီးလုံးအရောင်လဲ အစိမ်းရောင်၊ ဒါတွေအားလုံးဟာ ကြံ့ဖွတ်အသင်းရဲ. သင်္ကေတ အမှတ်သားတွေပါ၊ နစ္စ ဂီတ၊ကခြင်းခုံခြင်းကို ကိလေသာထူပြောလို. ဗုဒ္ဓကတားမြစ်ခဲ့တယ်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ အက သင်တန်း ဆိုတာကိုက နားထဲကြားရတာမကောင်းဘူး၊စစ်အစိုးရ ဗိုလ်ချုပ်အချို.နဲ. ကုလားကိုယ်တော် တစိတ်တည်း တစ်ကြံထဲရှိတယ် သာသနာကို ဖျက်ဆီးရာမှာ အာဏာပိုင်အချို.က ကုလားကိုယ်တော်နှင့် ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တာမို. သံကို သံကပဲ အချေးတက်ပြီး ပျက်ဆီးရသလို ဗုဒ္ဓဘာသာ အမည်ခံ အာဏာပိုင် အချို.နှင့် အတုယောင် ဒုဿီလကုလားဘုန်းကြီး လုပ်ရပ်ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအားလုံး စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်၊၊
ပိဋကတ်(၃)ပုံကို ကြောရိုးသဖွယ်ထားကာ မြန်မာနိုင်ငံကို တည်ဆောက်ခဲ့သည်မှာ နှစ်ပေါင်းကြာခဲ့ပါပြီ၊ ဗုဒ္ဓသာသနာတော်အမှန် တကယ် သန်.ရှင်းအောင်ဆိုတာက အခုလို မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ အယူမှားတွေ ဖြန်.တာကို လက်ပိုက်မနေဘဲ သာသနာ့ အန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးကို အားလုံးက လုပ်စေချင်ပါတယ်၊၊
မြန်မာနိုင်ငံမှာ သတင်းလွတ်လပ်မူ အပြည့်ဝမရှိတော့ ပြည်တွင်းမှာ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ အဓမ္မ၀ါဒတွေဟာ လုပ်ရှားခွင့်ရနေ ပါတယ်၊အမှားနှင့်အမှန် ရိုးရိုးလေး စဉ်စားလိုက်ရင်တောင် သိနိုင်လျှက် ဆင်ခြင်တုံတရားကင်းမဲ့စွာ အသက်ကြီး လူကြီးအရွယ်တွေပါ ကိလေသာ တိုးပွားရေးသင်တန်းကို တက်နေတာဟာ တိုင်းပြည်ရဲ. ဦးနှောက်ပျက်ဆီးမူကို ဖော်ပြရာရောက်ပါတယ်၊၊
“မျိုးစေ့မမှန် ပင်မသန် ဖူးတံလုံကင်း အသီးဖျင်း’’ အမျိုးမစစ်တဲ့သူက အမျိုးဘာသာ သာသနာကို မစောင့် ရှောက်ပဲ ဖျက်ဆီးမှာပါပဲ၊မျိုးစေ့မမှန်ရင် အပင်မသန်၊အသီးကလဲ အဖျင်းသီးပဲဖြစ်တာပါ၊ သာသနာကို ကြည်ညိုလို. ရဟန်းဝတ်လာတာ မဟုတ်ရင် သာသနာကို ဖျက်ဆီးတတ်တယ်၊သားရေပေါ်အိပ်ပြီး သားရေနား စားတဲ့ ခွေးလို၊သာသနာတွင်းမှာနေပြီးသာသနာကို ဖျက်ဆီးတဲ့ ကိလေသာ ထူပြောသောင်းကြမ်းရေး သင်တန်း ဖွင့်တာဟာ ကုလားအကြံအစီက ဘာကို ဦးတည်နေတယ်ဆိုတာ ထင်ရှားပါတယ်၊ကုလား မျိုးမို. ကုလားပုံစံ၊ လက်ညိုးထိုး ပြောတဲ့ ကုလားစရိုက်၊ ကိလေသာ ရာဂကို နိုးထစေတဲ့ အသံမျိုး “ နှာ”အသံနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ“အလုံး ဖိနပ်ချွတ်ကြ ရှေ.ကလူဖင်တွန်.ရင် နောက်က လိုက်တွန်. ကြလို.”ပြောထွက်တယ်၊ မြူးကြွတဲ့ သီချင်းဖွင့်ကာ အာလုံး ချွတ်ပစ်လိုက် အားလုံးချွတ်ပြစ်လိုက် ဆိုကြ ကကြနေတာဟာ အမျိုးမစစ်တဲ့ ကုလားသွေးမို. စီးပွားဖြစ်သင်တန်းကို အရှက်မရှိတဲ့ ကြံ့ဖွတ်နှင့် လက်ဝါးရင်းရိုက်ကာ သာသနာတော်ကို ထိပါး စော်ကားခဲ့တာ အားလုံးအသိပါပဲ၊၊
အမေရိကမွေးတဲ့ ကုလား၊ကုလားသွေးမပျောက် နောက်ဆုံး အကြမ်းဖက်အဖွဲ.မှာ ဖောက်ခွဲရေးသင်တန်း တက်ပြီး အမေရိကထဲမှာ အကြမ်းဖက်တာကြောင့် အမေရိကန်အစိုးရက ကုလားကို သတိထားနေရတယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာလဲ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဟန်ဆောင်ပြီး အမျိုးမစစ်တဲ့ ကုလားဆာဒူးက သင်္ကန်းတောင်မှ ကုလား အရောင်ဝတ်ကာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အနုနည်းနဲ. သိမ်းသွင်းကာ အခုဆိုရင် Brain Wash အလုပ်ခံရသူတွေ တနည်းအားဖြင့် သမ္မာဒိဋ္ဌိ မှန်ကန်တဲ့အယူမှ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ အယူမှားဖက်ကို ဆွဲခေါ်နေတာ အမြင်ပါပဲ၊
ဗုဒ္ဓဟောခဲ့တဲ့ ပါဠိတော်များနှင့် မကိုက်ညီတဲ့ မိစ္ဆာအလုပ်မျိုးကို ၀ါဒဖြန်.တာကြာင့် ဘုရားသားတော် အစစ် မဟုတ်တော့ဘူး၊မြန်မာနိုင်ငံက တိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမများက ပေါက်ဖွားတာမဟုတ်ပဲ ကုလားမျိုးက အကောင် ပေါက်ခဲ့တာမို. မြန်မာအမျိုးမစစ်တဲ့ ကုလားမျိုးသာဖြစ်တယ်၊အဲတော့ ရိုးရိုးလေး စဉ်းစားလိုက်ပါ၊၊
“အမျိုးမစစ်တဲ့သူကို သွေးစစ်စရာမလို သူနဂိုရုပ်က ကုလားရုပ်၊သူလုပ်တဲ့ အလုပ်က မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအလုပ်၊ ဖင်လှုပ် ရင်လှုပ်၊တင်ကြီး တုံ.ကာ ခုံစွ ခုံစွနဲ့ ရင်သားလှုပ်တဲ့ ကာမဂုဏ်ကို ခံစားတဲ့ ကုလားစုတ်က အားလုံး “ လန်း’’ စေဖို. အားလုံးချွတ် အားလုံးချွတ်ပါတဲ့ဗျ၊ ကရင်မလေးကိုခေါ်လို. သူ.ပါးစပ်က အော်နေတဲ့ နှာသံ၊ ကိလေသာ ထူပြောစေဖို. အထူးအဖော် ကြံ့ဖွတ်ဗာလတွေနဲ. ဇွဲကပင်မှာ ပွဲဝင်ကာ ကကြတဲ့ ရာဂ ငမှိုက်သား၊ အခုများ ဘုရားရှိရင် မောဃပုရိသ ကုလားလို. ဆိုပေမည်၊၊
ဘုရားမရှိ တရားမသိ၊ လောကပါလတရား မရှိတဲ့ ကိလေသာထူပြောရေး ဣဒ္ဓိပါလ ငရဲဘုံကို သင်တန်းကြေး ငွေသွင်းလို. ဖင်ကိုစမ်း ရင်သားကို ရမ်းလို. တရုတ်သံ သီချင်းတွေနဲ. ကုလားရဲ. ဘရိန်းဝက်စ်ကို သတင်းစာမှာ ကြေညာ တမင်တကာဖန်တီးနေတာဟာ ကြေးစားအစစ်ပါ၊ အသေးမွားတော့မထင်နဲ့ သူ.ကိုဖေးမနေတာက ပြည်သူ.အချစ်တော် သန်းရွှေရဲ. ဆိုက်ကို ဖလော်တွေပဲ၊၊
သာသနာ့အကျိုး သယ်ပိုးသလို တကယ်တော့ သူတို.ဟာ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေ၊
စိတ်ဓာတ်မြှင့်တင် သန်တန်းဆိုပေမဲ့ လောကပါလ တရား မလေးစားတဲ့ လူ.ဗာလတွေ၊
ဘာသာတရားကို အကြောင်းပြ မာယာများတဲ့ ကုလားကိုယ်တော် ဣတ္ထိ အဖော်တွေနဲ.ပျော်၊
မတော် တရော် ဟစ်ဟော့စ် ဟစ်ပေါ့ ချွတ်ပြစ် ချွတ်ပြစ်တဲ့၊
အယူမှားတွေကို လူငယ်တွေကြား ဖျဲချ ပြဲသွားတဲ့ နှလုံးသားတွေကို ဘယ်သူကုသပေးမှာလဲ၊
သာသနာအတွင်းမှာ ရဟန်းအသွင်နဲ. ခွင် ဖန်၊ အမြင်မှန်မရှိသူတွေက ဆည်းကပ်၊
တကယ်တော့ ဣထ္ထိဗာလတွေဟာ ဣဒ္ဓိပါလနဲ့နေ အဆိပ်ရှိတဲ့ မြွေတကောင်လို ထိမိတဲ့ ညတွေမှာ….
ရေးသူ စက်တင်ဘာထာဝရ အချိန် 9:29 AM